यी हुन् : विश्वकै सबैभन्दा फोहारी व्यक्ति, जसले ६० वर्षदेखि नुहाएका छैनन्…. - Onlinenews Global
July 25, 2021 laxmiLeaveaComment on यी हुन् : विश्वकै सबैभन्दा फोहारी व्यक्ति, जसले ६० वर्षदेखि नुहाएका छैनन्….
कुनैपनि व्यक्ति जसले ६० बर्ष देखि ननुहा’ई बसेका छन् भन्ने सुन्दा तपाईंलाई पत्यार न’लाग्न सक्छ ।
तर, विश्वमा यस्ता व्यक्ति भेटि’एका छन् जो ६० बर्ष देखि ननुहाई बसेका छन् । यो प्रसङ्ग इरानको हो । सामाचार माध्यमहरुमा जनाईएअनुसार, इरानका ८० वर्षीय अमो हाजीले ६० वर्षयता नुहा’एका छैनन् ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
त्यही ६० वर्षदेखि ननु:हाएर उनि विश्वकै सवै’भन्दा फोहरी व्यक्ति बनेका छन् । अमो हाजी अजिव तरिकाले जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् । २० वर्षको हुँदा नुहाउन छाडे:का उनले ६० वर्षदेखि शरीरमा एक थोपा पनि पानी पर्न दिएका छैनन् । नुहाएमा आफू विरामी पर्ने उन:को दावी छ ।
उनी आफ्नो खाना र पि’उने पानी पनि कहिल्यै स:फा राख्दैनन् । उनी जनावरका सडेगलेका मासु खाने गर्छन् भने पानी पनि फोहर नै पिउँछन् ।
जब उनको कपा’ल लामो’ हुन्छ उनी का:ट्नुको साटो जलाउँछन् । उनको शरीरमा बश्त्र पनि कहिल्यै सफा हुँदैन । चिसोबाट बच्न भने उनी हेलमेट लगाउँछन् । तर, पनि उनलाई आफ्नो अनु’हार सुन्दर लाग्छ ।
३८ वर्षसम्म ननु’हाएर वि’श्वमा सवैभन्दा लामो समयसम्म ननुहाएको कीर्तिमान भारतका ६६ वर्षका कैलाश सिंह’को नाममा छ । तर, कैलाशको की’र्तिमान आफूले धेरै अघि तोडे’को हाजीको’ दावी छ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
आइसक्रिम चाट्दा अमेरीकामा यी युवालाई किन भयो जेल सजाय? कारण थाहा पाए पर्नु हुनेछ चकित (भिडियो हेर्नुहोस्)